Fandraisana an-tsary ICRE mahatalanjona avy amin'ny Ink Factory Studio | Martech Zone
Alakamisy, Jona 4, 2015 Zoma, Jona 5, 2015 Douglas Karr
Taloha, te ho mpanakanto sary aho. Manao asa kely aho izao fa ny olon-drehetra sendra ahy eo amin'ny sehatry ny asa no apetrako - misalasala aho mieritreritra fa afaka hahatratra ireo taona maro lasa. Nandritra ny taona vitsivitsy ny fandrafetana mekanika dia nanapotika ny fahaizako mamorona ihany - ankehitriny dia momba ny symmetry. Na izany na tsy izany… rehefa nandeha namaky ny ICRE tany Chicago aho dia tonga tany amin'ny Vahaolana fitarihana trano heva.
Momba ny fitarihana
Manomboka amin'ny varotra avo lenta, tranokala eCommerce miharo tanteraka, hatramin'ny rindranasa finday, vahaolana amin'ny orinasa ary serivisy fanohanana, manome torolàlana misy serivisy fiainana andavom-bolo hanohanana ny zavatra ilainao i Guide.
Ny mpanjifa fitarihana dia manomboka amin'ny mpivarotra marika marika sy mpamokatra vokatra ho an'ny mpanjifa hatrany amin'ny mpanonta, mpanome tolotra ary fikambanana mpanao asa soa.
Ny torolàlana dia nangataka ny fanampian'ny Ink Factory Studio hanao sary an-tsary mandritra ny fihaonambe. Izao no lazaiko anao - raha te hanana olona marobe manodidina ny booth ianao… ampio fotsiny ny Ink Factory Studio! Ireto misy sanganasa sasantsasany (na raha manontany ahy… sangan'asa!) Avy any Alison ianao:
Fahafahana vaovao amin'ny varotra dizitaly
Inona avy ireo firaketana sary?
Ny teny hoe firaketana sary dia mety midika zavatra maro samy hafa amin'ny olona maro, fa ny fototr'ilay famaritana dia tsotra. Raha mihaino am-pahavitrihana ny adihevitra ataonao, dia mamolavola ny teny tononina ho lasa lahatsoratra sy sary hita maso izahay. Ireto sary hita tarihin-tanana ireto dia noforonina tamin'ny fotoana tena izy, izay ahafahan'ny vontoaty mamelana amin'ny solaitrabe feno vaovao. Ny firaketana sary dia manampy refy hafa amin'ny fifanakalozan-kevitrao amin'ny alàlan'ny famoronana fahatakarana lalindalina kokoa ny atiny miaraka amin'ny fanentanana ny efitrano iray manontolo miaraka amin'ny herin'ny hain'ny vondrona. Araka ny nofaritan'ny Ink Factory Studio.
Omni manaporofo ny orinasanao
Ny fitomboan'ny varotra B2B
Ny vola azo avy amin'ny fampanjariana manokana
Tags: varotra b2bvarotra nomerikaecommercefironana ecommercefamolavolana Sarysary an-tsarysary an-tsarystudio fananganana ranomaintyfamolavolana sary mivantanapersonalizationny orinasa fanaovana ranomainty
Fomba 9 hanatsarana ny varotra vokatra amin'ny marketing amin'ny mailaka